Uche Ithaca nke Cavafis dere na mbipụta nke Akwụkwọ Nordic - Ikkaro
Inicio >> Akwụkwọ >> Ithaca nke Cavafis
Echere m na onye ọ bụla ga-ama Constantino Cavafis, onye edemede Greek nke narị afọ nke XNUMX, amụrụ na Alexandria (Egypt). A na-ewere onye abụ Grik kacha mkpa n'oge na-adịbeghị anya. N’abụ a maara nke ọma Ithaca, a na-agbakwunye ọrụ ndị ọzọ dị ka Na-eche ndị barbar o Chineke hapụrụ Antonio.
Nwere ike ịchọta uri ahụ ebe niile. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịgụ ya, aga m ahapụ gị ya na njedebe. Mana ihe ị masịrị gị na nke a bụ idezi. Ọ bụ akwụkwọ dum ewepụtara maka amaokwu 36 nke otu uri.
O bu ihe ijuanya na n’ime ụbọchị ole na ole m nwere, a na m ewepụ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla iji nụ ụtọ ya ma gụgharịa ya ọzọ. Na mmetụta ahụ, ihe ụtọ ahụ, anaghị enweta na dijitalụ. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị ị nwere ike zụta ya ebe a
Pụtara nke Ithaca
A mụọ uri a nke ọma ma nyochaa nke ọma, ị nwere ike ịchọ nyocha n'ezie ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị na-eche. Ihe m hapụrụ ebe a bụ mmetuta m nwere na m ga-agbanwe dị ka uri a, dabere na ịgụgharị ya na ahụmịhe m na ndụ, na-egosi m ihe ọhụụ.
Ihe ọ na-enye m bụ ndụmọdụ. Jiri ndụ mee ihe, jiri ụzọ mee ihe ọ bụla ị na-eme, na ebumnuche gị, n'ihi na ihe dị mkpa na ihe ga-eme ka ị baa ọgaranya bụ ahụmịhe, nsogbu ị na-ezute na njem ahụ ma ọ bụ n'ụzọ ị ga-esi mee ihe mgbaru ọsọ gị ma ọ bụghị ebe ị na-aga n'ime onwe ya.
Ọ bụ ya mere o ji agba anyị ume ka anyị ghara iji ọsọ ọsọ rute ebe anyị na-aga, ebum n’uche anyị, na Ithacas anyị na ịchọpụta, ịnụ ụtọ, ibi ndụ ma mụta ihe niile anyị nwere ike. Extendgbatị njem ahụ na ịbawanye ahụmahụ dị ndụ.
Ọ bụ ihe ọ pleasureụ n'ezie ịgụ ma gụgharịa abụ a.
Ọ bụrụ na ị banyere na-achọ uri ebe a inwere ya.Ibu Ithaca site CP Cavafis (Nsụgharị nke Vicente Fernández González)
Mgbe ị buliri njem gị gaa Ithaca,
jụọ ka ụzọ gị to ogologo,
juputa na ihe omimi, juputara na ihe omuma.
Nye ndị Laystrygians na Cyclops.
Atụla iwe Poseidon,
ha agaghị agabiga ụzọ gị,
ọ bụrụ na echiche gị dị elu, ọ bụrụ na mmetụta uche
siri na mmụọ gị na ahụ gị akwụ.
Ma Lalestrygons ma ọ bụ Cyclops
ma ọ bụ ihe na-eme ihe ike Poseidon ị ga-ahụ,
ọ bụrụ na i bughi ha n'ime mkpụrụ obi gị,
ma ọ buru na nkpuru-obi-gi emeghi ha ka ha di n'uzọ-gi.
Rịọ ka ụzọ gị to ogologo,
na otutu ututu ututu
in which - with ụtọ, were ọ joyụ -
ị banye ọdụ ụgbọ mmiri ndị a na-ahụtụbeghị;
kwụsị na mba ndị Finishia,
Nweta kwa ahia ahia gi,
nne-pearl na coral, amber na ebony,
na ụdị isi ọma dị iche iche,
ka aromas nke anụ ahụ nwere ike isi;
ọ hụ ọtụtụ obodo ndị Ijipt,
ịmụta na ịmụta n'aka ndị maara.
Na-eburu Ithaca n'uche mgbe nile.
Inweta ebe ahụ bụ ebe njedebe gị.
ma na-enweghị iji ọsọ ọsọ na njem ahụ.
Ọ ka mma ịgbatịkwu ahụ ọtụtụ afọ;
mgbe ị mere agadi, ị ga-erute n'àgwàetiti ahụ,
na akụ na ụba niile a na-enweta n'okporo ụzọ,
na-echeghị Ithaca ka baa ọgaranya gị.
Ithaca nyere gị ọmarịcha njem.
E wezụga ya, ị garaghị agawa.
O nweghi ike inye gi ihe ozo.
Ma oburu n’ichoo ogbenye ya, Ithaca aghughi gi.
Site n'amamihe i nwetara, ya na ahụmịhe gị,
ị ghọtaworị ihe Ithacas pụtara.
Ozi na-adọrọ mmasị, ngwaọrụ na akụrụngwa iji nwekwuo nghọta nke onye edemede na ọrụ ya
Cavafis Official Archive (na Bekee)
1 Pụtara nke Ithaca